एनआरएनएमा धमाधम उम्मेदवारी घोषणा - Karobar National Economic Daily
एनआरएनएमा धमाधम उम्मेदवारी घोषणा
query_builderSeptember 27, 2017 8:59 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1058
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दिने क्रम बढेको छ । वर्तमान कार्यसमितिमा २ पटक उपाध्यक्षसहित यसअघि कोषाध्यक्ष भइसकेका भवन भट्टले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै अन्य पदका लागि पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ ।
यही असोज २८ देखि ३१ सम्म काठमाडौंमा हुन गइरहेको आठौँ अधिवेशनमा विश्वभरका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले आफूलाई योग्य दाबी गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । विगत केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्पmत उम्मेदवारी घोषणा गर्ने आकांक्षीहरूको चुनाबी प्रतिबद्धताबारे जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
अध्यक्षमा भट्टको मात्रै उम्मेदवारी
एनआरएनए अध्यक्षका लागि अहिलेसम्म भवन भट्टले मात्रै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । टीबीआई समूहका अध्यक्ष भट्ट यसअघि संघमा दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष र एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष निर्वाचित भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बिमाका लागि ‘एनआरएन वैदेशिक रोजगार आपतकालीन कोष’को रकम परिचालन गर्ने, महिला फोरमलाई सशक्त बनाउने एवं नयाँ लगानीकर्ताका लागि स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन् । हाल एनआरएनए वैदेशिक रोजगार कोषमा करिब २ करोड ५० लाख रूपैयाँ रहेको छ ।
भट्टले वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाएका लाप्राक नमूना बस्ती, एनआरएनए भवन निर्माण, भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड वियोन्ड तथा सामूहिक लगानीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सपिला राजभण्डारी (महिला उपाध्यक्ष)
एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा महिला उम्मेदवारहरूको संख्या अघिल्ला चुनावमा भन्दा पनि बढी देखिने भएको छ । एनआरएनएको आगामी आठौँ विश्व सम्मेलनले चयन गर्ने नयाँ कार्यसमितिको महिला उपाध्यक्ष पदका लागि सपिला राजभण्डारीले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् ।
एनआरएनएको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सधंैजसो देखिने रुसमा कार्यरत सपिला राजभण्डारीले विश्व सम्मेलनको लागि महिला उपाध्यक्ष पदमा उमेदवारी घोषणा गरेकी हुन् । राजभण्डारीले एनआरएनएको योजनाका साथै विशेष गरी प्रवासमा कार्यरत महिलाको मुद्दामा क्रियाशिल रहने बताएकी छिन् ।
उनले घोषणापत्र जारी गर्दै १ हजार भन्दा बढी संख्यामा महिला श्रम रोजगार भएको देशमा नेपाल राजदूतावासको संरचनामा आपतकालीन सुरक्षा गृहको स्थापनाको जोडदार प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।
भोमा लिम्बू ( महिला संयोजक)
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भोमा लिम्बूले एनआरएनए अभियानमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउने प्रतिबद्धतासहित महिला संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् । अष्ट्रेलियाकी वर्तमान आइसीसी सदस्य लिम्बूले महिला संयोजकमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेकी हुन् ।
एनआरएनएमा आफूले खेलेको कार्य र सबैको मागबमोजिम आफूले उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताउँदै लिम्बूले एनआरएन अभियानमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेकी छन् ।
१० वर्षमा गरेको एनआरएनएको अनुभवलाई महिला सशक्तीकरणका लागि काम गर्न आफू उम्मेदवार भएको बताइन् । उनले नेपालमा गएको भूकम्प, बाढीपीडितहरूका लागि राहत वितरण तथा मेडिकल क्याम्प संचालन जस्ता सेवामा समेत काम गरेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छिन् । समाजिक क्षेत्रमा लागेका कारण सन् २००६ सांस्कृतिक राजदूतको उपाधी, २००९ भोलियन्टर अफ दि इयरमा मनोनित, २०१७ मा एनआरएनए अष्ट्रेलिया कम्यूनिटि सर्भिस पर्सनालिटी अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित भइसकेकी छिन् ।
गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ (एसिया संयोजक)
गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ गैरआवासीय नेपाली संघको यही असोज २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने अधिवेशनका लागि एसिया प्यासिफिक संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
एनआरएनए अभियानको सुरुवातसँगै यस अभियानमा प्रवेश गरि एनआरएनए जापानको सदस्य, उपाध्यक्ष, आइसिसि सदस्य हुँदै दुई पटक एसिया प्यासिफिक सहसंयोजक पदमा रहि आफ्नो जिम्मेवारी अत्यन्त कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका छन् । श्रेष्ठले संयोजकमा उठ्ने घोषणासँगै एसियाका प्रतिनिधिहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
श्रेष्ठले एनआरएनए जापानको सदस्य, उपाध्यक्ष, आइसिसि सदस्य हुँदै एसिया प्यासिफिकको सहसंयोजक समेत रही काम गरिसकेकाले स्वभाविक रुपमा संयोजकको दावेदार रहेको बताए । “एसिया प्यासिफिक सहसंयोजक भएर मैले एनआरएनएमा जे जति गरें त्यो सबैको सामुन्ने छर्लङ्ग छ, अब म अहिले भन्दा बढी जिम्मेवारी लिन चाहन्छु ।
त्यसैले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको संयोजकको उम्मेदवार घोषणा गरेको हुँ,” श्रेष्ठले भने, “यसपटक पनि गैर आवासीय नेपालीहरूबाट पहिलेजस्तै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।”
डा. विनय श्रेष्ठल (युरोप संयोजक)
जुरिच स्विट्जरल्यान्डमा रहेका डा. विनय श्रेष्ठले एनआरएनको युरोप संयोजकमा उम्मदेवारीको घोषणा गरेका छन् । संघका स्विटजरल्यान्ड संस्थापक उपाध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका डा. श्रेष्ठले बुधबार आफ्नो उम्मदेवारी घोषणा गरेका हुन् ।
हाल स्विटजरल्याण्डको जुरिचस्थित क्यान्सर अस्पतालमा रेडिएसन अंकोलोजी विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत डा. श्रेष्ठ एनआरएनका वर्तमान आइसिसी सदस्यसमेत हुन् ।
नेपालबाट एमबिबीएस अध्ययन पूरा गरेका श्रेष्ठले स्विटजरल्यान्डबाट एमडी गर्नुका साथै बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले स्विटजरल्यान्डबाटै एफएमएच रेडियोलोजीमा विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन् । १४ वर्षदेखि स्विटजरल्यान्डमा कार्यरत उनी क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हुन् ।
एसी शेर्पा ( अमेरिका क्षेत्रीय संयोजक)
गैर आवासीय नेपाली संघको अमेरिकाज क्षेत्रको क्षेत्रिय संयोजक पदका लागि वर्तमान क्षेत्रीय उपसंयोजकले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
अमेरिकाको वाशिंगटन राज्यको सियाटल शहर र क्यानाडामा समेत रियल स्टेटको व्यवसाय तथा पर्यटन, माउण्टनेरिङ, लगायतको व्यवसाय गरिरहेका शेर्पा एनआरएन अभियानका लागि एक प्रतिष्ठित अभियन्ता हुनुहुन्छ ।
आफ्नो पितृशोक पर्दा पनि एनआरएनएको गोर्खा लाप्राक प्रोजेक्टमा काम गर्न पुगेका शेर्पा महाभूकम्पमा र बाढिपहिरो उद्धारमा सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । एनआरएनए मुख्यालय क्याम्पस निर्माणमा सहयोग गर्ने र आफैं पनि फिल्डमा गएर सहभागी हुने सक्रिय गैरआवासीय नेपालीमा पर्छन् । उनले सोलुखुम्बु र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका दुई विद्यालय भवन निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गरिसकेका छन् भने धेरै सामाजिक सेवाका कार्यमा समेत सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।
सगरमाथाको चुचुरोमा एनआरएनएको झण्डा लिएर आरोहण गर्ने शेर्पाले विश्वका ७ उच्च शिखरहरू (सेभेन समिट) को सफल आरोहण गरेका छन् । हाल सोही विषयमा ७५ देशका लागि प्रशिक्षक समेत रहेका उनले नेपालमा पनि थुप्रै लगानी एकल र सामूहिक रुपमा गरिसकेका छन् । आइसीसी सदस्यबाट एनआरएनएमा प्रवेश गरेर नियमित रुपमा अभियानमा रहेका शेर्पा हाल अमेरिकाज क्षेत्रको निर्वाचित क्षेत्रीय उपसंयोजक छन् ।
गोविन्दप्रसाद गौतम (युरोप उपसंयोजक)
एनआरएनएको वर्तमान आईसीसी सदस्य गोविन्दप्रसाद गौतमले युरोप उपसंयोजक पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापनाकालबाटै रुसमा रहेर सक्रिय रहेका गौतम यसअघि लगातार दुईपटक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य भएर काम गरिसकेका छन् ।
नेपालको पर्वत जिल्ला फलेवास नगरपालिका जन्मेर करिब ३१ वर्षपहिले सन् १९८७ मा हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिमा तत्कालिन सोभियत संघमा पुगेका गौतम विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गौतमले आफ्नो जन्म ठाउँ र देश प्रतिको कर्तब्य र उत्तरदायित्व केहि हद सम्म भए पनि पूरा गर्ने उद्देयले यस संस्थामा सक्रिय भएको बताएका छन् ।युरोप उपसंयोजक घोषणा गरेका गौतमले रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा कार्यकारी सदस्य, उपाध्यक्ष, र त्यसपछि सन् २०१३–२०१५ र हालको २०१५–२०१७ को लागातार २ कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य भई काम गरिसकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा ४ वर्ष काम गर्दा आफ्नो क्षमताको आधारमा उल्लेखनीय रुपमा परोपकारी योजनामा सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । रुसमा अध्ययनकै क्रममा व्यवसाय सुरु गरेका गौतम विश्व नेपाली साहित्य महासंघ रुसको अध्यक्षसमेत रहेका छन् । उनले गैरआवासीय नेपाली अभियानमार्फत मात्र नभई विभिन्न संघसंस्थामार्फत समेत सामाजिक कार्यमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
बिजन भट्ट (युरोप उपसंयोजक)
गैरआवासीय नेपाली संघ यूरोप उपसंयोजकमा बिजन भट्टले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । भट्टले अक्टोबर महिनाको दोस्रो साता काठमाडौंमा हुने विश्व सम्मेलनको लागि आफ्नो उम्मेदवारी अघि सारेका हुन् । गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको सल्लाहकार रहेका भट्टले यसअघि संघको केन्द्रिय सदस्यको रुपमा काम गरिसकेका छन् ।
संघको स्थापनाकाल देखि विभिन्न फोरममा रहेर गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा सकृय भट्ट निकै मिलनसार र भद्र व्यक्तित्वको रुपमा वेलायतका चिनिन्छन् । भट्टले गैरआवासीय नेपाली अभियानमा आफूले बटुलेको अनुभवको आधारमा उपसंयोजक पदमा उम्मेदवारी दिने निष्कर्षमा पुगको बताए । उनले आफूले जितेर आए पछि यूरोपस्थित संघका राष्ट्रिय समिति भित्र समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
भवानीशंकर तिवारी (एसिया संयोजक)
एनआरएनएको एसिया संयोजकमा मलेसियामा रहेका भवानीशंकर तिवारीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । क्वालालम्पुरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका सबै एनआरएनहरूलाई समेटेर सहकार्य गर्दै अगाडि बढाउनको लागि आफूले उम्मेदवारी दिन लागेको तिवारीले बताए । सामूहिक लगानी तथा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पहल गर्दै कल्याणकारी कोषलाई अझ मजबुत बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिन आफूले उम्मेदवारी दिन लागेको उनले बताए ।
लाखौं नेपालीहरू रहेको मलेसियाले एनआरएनको अभियानको १५ वर्षसम्म पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकारी पद नदिनु लज्जास्पद भएको भन्दै उनले संयोजकमा उम्मेदवारी दिएको बताए । लामो समयदेखि मलेसियामा ब्यवसाय गर्दै आएका तिवारी मलेसियाको दुई कार्यकाल कार्यकारी सदस्य र दुई कार्याकाल उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको सदस्य रहेर काम गरिसकेका छन् ।
अर्जुन कुमार श्रेष्ठ (महासचिव)
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सचिव अर्जुनकुमार श्रेष्ठले महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।श्रेष्ठले बेल्जियमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एनआरएनएको अभियानमा संस्थाको साधारण सदस्यदेखि दुई पटक आई सी सी सदस्य, यूरोप संयोजक, सचिवसम्मको भूमिकामा रहेर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।
एनआरएनएमा कुनै नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू भन्दा अहिले जुन नीति र कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउँदै हरेक प्रवासी नेपालीको अपनत्व विकास हुने खालको एनआरएनए बनाउनेतर्फ ध्यान गर्ने बताएका छन् ।
श्रेष्ठ एनआरएनएमा बेल्जियमबाट दुई पटक आईसीसी सदस्य, यूरोप संयोजक, सचिवसम्मको भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनले संस्थाको विधान बमोजिम आवश्यक मुलुकमा विस्तार गर्न र विश्वभरका नेपालीलाई एउटै सुत्रमा बाँध्ने भूमिकामा प्रयास सकारात्मक रहने बताएका छन् ।
सन्तोष भट्टराई (सचिव¬)
एनआरएनएको आगामी अक्टोबरमा हुने आठौं विश्वसम्मेलनमा जर्मनी निवासी सन्तोष भट्टराईले सचिव पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
एनआरएन अभियानमा लागेर सेवा गर्ने मनसाय बोकेका भट्टराईले सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै सहयोगका लागि विश्वभरका एनआरएनहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
करिब २५ वर्षदेखि जर्मनीको हेम्वर्ग सहरलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर व्यवसाय संचालन गरेर बसेका भट्टराई एनआरएन अभियानमा लामो समयदेखि आबद्ध छन् । भट्टराइले एनआरएनए जर्मनीबाट आईसीसी सदस्य, एनआरएन नेपाली नागरिकताको निरन्तरता कार्यदलको युरोप संयोजक, व्यापार तथा लगानी प्रर्वद्धन कार्यदलको सदस्य, लाप्राक नमुना बस्ती निर्माणको स्वंयसेवक परिचालक कार्यदलको युरोप संयोजकलगायतको जिम्मेवारी समालिसकेका छन् ।
विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकआपसमा जोड्दै पंजीकृत सदस्यहरूको व्यवथापन, सहज नागरिकताका पाउने व्यवस्था, विश्वभर रहेका नेपालीको हकहितको सुरक्षा, मध्यपूर्वमा कामगर्ने श्रमिकहरूको हितका लागि स्थापित परोपकारी कोषलाई पूर्णता दिन, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न, प्रवासमा नेपाली कला, संस्कृति र साहित्यको सम्बद्र्धन गर्न, नेपाली उत्पादनको बजार बिस्तार गर्न, युवा वर्गलाई उद्यमशिल बनाउन स्टार्ट अप कार्यक्रमको ब्यवस्था गर्न तथा मुलुकको सम्वृद्धिका लागि विदेशी लगानीका साथसाथै एनआरएनहरूको सामूहिक लगानी भित्र्याउन आफ्नो विशेष पहल रहने भट्टराईले बताए ।
हेमन्त सेढाई (युरोपियन क्षेत्रीय उपसंयोजक)
एनआरएन युरोपियन क्षेत्रीय उपसंयोजकमा हेमन्त सेढाईले उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । गैर आवासिय नेपाली संघ पोर्तुगलको आगामी कार्यकालका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पदस्थापना गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सेढाईले उम्मेदवारीको घोषण गरेका हु्न ।
दुइ साता अघि पोर्तुगल युरोपमा छुरा प्रहारबाट हत्या गरिएका हरिबहादुर जिसीका छोरीको स्नातक तह सम्मको पढाईका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँको दरले शैक्षिक छात्रवृत्ति दिने बाचा गर्दै उनले उम्मेदवारीको घोषण गरेका हुन् ।
११ वर्षदेखि युरोपमा बसोबास गदै आएका सेढाईसँग एनआरएन एनसिसीदेखि आइसीसीसम्मको अनुभब रहेको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलको सन् २००८ देखि १० सम्म सचिव, सन् २०१३ देखि १५ सम्म महासचिव हुँदै हाल गैरआवासीय नेपाली संघ आइसीसीको आर्थिक स्थायी समितिको सदस्यमा रहेका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति पोर्चुगलका संस्थापक सचिव समेत रहेका सेढार्इंको एकदशक लामो एनआरएन भित्रको अनुभब रहेको छ ।
युरोपको बेलायत पछि सबैभन्दा ज्यादा आप्रवासी नेपालीहरूको धेरै बसोबास पाईएको देश पोर्तुगलको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले उम्मेदवारी दिएका हुन् । समग्रमा आप्रवासी नेपालीहरूको समस्या, उनीहरूको हक, हित र अधिकार लगायतका बिषयमा बिगतका धेरै वर्षदेखि सहकार्य गरिरहेका उनले थप नयाँ कार्ययोजना सहित उम्मेदवारी दिएका छन् ।
निर्वाचन एनआरएनए गैरआवासीय नेपाली संघ उम्मेदवारी